इपिएस रोजगार सुचारु गर्न काठमाडौ – सिओल सिधा उडान हुनुपर्ने ! – Kantipur Press
इपिएस रोजगार सुचारु गर्न काठमाडौ – सिओल सिधा उडान हुनुपर्ने !
रोजगारी सुचारु गर्न काठमाडौं–सिओल सिधा उडान हुनुपर्ने, कोरिया गइसकेपछि नेपाली कामदार कम्तीमा १४ दिन होटल क्वारे’न्टिनमा बस्नुपर्ने र त्यसको खर्च कामदारले बेहो’र्नुपर्ने कोरियाको सर्त नेपालले स्वीकार गरेकाले अहिले कामदारको खर्च बढेको हो।
विगतमा भाषा परी’क्षा उत्ती’र्ण गरिसकेका नेपाली कामदार विस्तारै कोरिया जान थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार विगतमा भाषा परीक्षा गरेका सात हजार र घर बिदामा आएका तीन हजार गरी करिब १० हजार नेपाली कामदार को’रोनापछि कोरिया जान पाएका छैनन्।
तीमध्ये कतिपयको भाषा परीक्षा उ’त्तीर्ण गरेको अवधि दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। महामारी अघिसम्म भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको दुई वर्षभित्र रोजगारीका लागि कोरिया जान नपाए पुनः भाषा परी’क्षामा सहभागी हुनपर्ने नियम थियो। पछिल्ला वर्ष नेपालमा धेरै रेमिटेन्स आप्रवाह आउने मुलुकमा कोरिया पनि पर्दै आएको छ।
आव २०७७र७८ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवायुवतीले नौ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रेमि’ट्यान्स पठाएका थिए। तर पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा गिरावट आएपछि रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्न थालेको छ।
चालु आवको तीन महिना ९साउन–असोज० मा रेमिट्यान्स आप्रवाह घटिसकेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको तीन महिनामा रेमि’ट्यान्स दुई खर्ब ३९ अर्ब रूपैयाँ भित्रिएको छ। कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्दा यसअघि नै धेरैले रेमिट्यान्समा गि’रावट आउन सक्ने अनुमान गरेका थिए।
भदौमा घटेको रेमिटेन्स अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनमा ६।३ प्रतिशतले कमी हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ८।१ प्रतिशतले बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा रेमि’ट्यान्स आप्रवाह५।८ प्रतिशतले कमी आई १ एक अर्ब ३१ करोड रहेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह २।६ प्रतिशतले बढेको थियो।
को’रोना महामा’रीपछि कैयौं गन्तव्य मुलुकबाट मागपत्र नआउँदा वैदेशिक रोजगारी सुस्ताएको छ। हालसम्म श्रम स्वीकृति जारी भएको आधारमा सबभन्दा ठूलो गन्तव्य मानिएको मलेसिया रोजगारी कोराना महामारी सुरु भएपछि ठप्प छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतारलगायत अन्य गन्तव्य मुलुकबाट महामा’रीको बेला मागपत्र आए पनि त्यस्तो संख्या थोरै रहेको व्यवसायीको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार भदौमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति ९संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण लिने नेपालीको संख्या वृद्धि भएर ३८ हजार चार सय ९२ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ९९।२ प्रतिशतले घटेको थियो।
त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या पनि वृद्धि भई २२ हजार नौ सय ७६ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ८६।५ प्रतिशतले घटेको थियो। विस्तारै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै गएपछि अर्को वर्षदेखि पुनः रेमिट्यान्स वृद्धि हुने अनुमान छ। -आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।